ပိုးဝင်သွားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ပိုးဝင်သွားခြင်း
Posted by ငပွကြီး on May 17, 2012 in Photography | 21 comments
M G မှာရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာများကို အားကျမိရင်းက ဓါတ်ပုံပိုးဝင်သွားပါပြီ…လိုအပ်တာလေးတွေ သင်ပြပေးကြပါဦးနော်…
F2.8 / 160 / ISO100
်င်္်F2.8 / 80 / ISO100
်င်္်F2.8 / 80 / ISO100F2.8 / 160 / ISO100F2.8 / 160 / ISO100
သူကြီးရေ ၃ ပုံတင်လိုက်တာ ကျန်တဲ့ပုံတွေဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး ကူညီပေးပါဦး..ကျူမီယား..ကျူမီယား…
ဘာများတုန်းလို့ ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ..
အကောင်ဗလောင်တွေများ ဘယ်ထဲ ဝင်သွားတာတုန်းလို့ …
အဟီးးး နောက်တာပါ .. :D
ရွာထဲက ဒါ့ပုံဆြာတွေ လာရင် အကြံပြုကြပါလိမ့်မယ်ဗျာ ..
ကျုပ်ကတော့ ဘာမှမသိလို့ လစ်လိုက်ဦးမယ်ဗျို့ …
ဒီလိုပုံတွေတင်ဖို့ကို သင်ပေးထားတဲ့ ကျွှန်တော့ဆရာ ကိုကိုအံ ကိုကျေးဇူးအထူးပါ…ကောမန့်အတွက်ရောပဲ…ပန်းတနော်တုန်းက မဆုံရလိုက်လို့ နောက်မှလက်ဖက်ရည်တိုက်ပါ့မယ်…
ကင်မလာလေး နဲ့ဟိုချိန်ဒီချိန်လုပ်ရင် အဆင်မသင့်ရင် အဆော်ခံရတတ်ပါတယ်။
cropping ရော Depth of Field ရော ကောင်းတယ်ဗျ …
အဲ့ ..sharpness တခုပဲ နည်းနည်းလိုသွားတာ..
အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ …ဆက်ရိုက်ရင်းနဲ့ …
ကြုံလို့ အကျယ်ပြောရရင် … ဒါကို
ပိုး လို့တော့ မသုံးစေချင်ဘူးဗျ…
ဒါက ပိုးမဟုတ်ပါဘူး …
ဒါ့ပုံ ရိုက်သူတိုင်း ပိုကောင်းတဲ့ ဒါ့ပုံ ရိုက်နိုင်ဖို့ ရိုက်တတ်ဖို့
တတ်နိုင်ရင် DSLR ၀ယ်ပေါ့
မ၀ယ်ဖြစ်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး ..အိမ်သုံးကင်မရာတွေ
ကို ပိုသုံးနိုင် ပိုနားလည်နိုင်အောင် ရေးနေဖတ်နေကြရတာပဲ မဟုတ်ဘူးလားဗျ..
ကျနော် ကနွန်း ကိုယ်စားလှည်လည်းမဟုတ်ပါ …
နိုက်ကွန်းနဲ့လည်း မပါတ်သတ်ပါ…. သို့သော် ..
ကျနော့် မိတ်ဆွေတွေ ပိုကောင်းတဲ့ ဒါ့ပုံရိုက်နိုင်ဖို့
ကျနော် တတ်သမျှတော့ ရှဲပါတယ်…
(တခါတခါ အထင်လွဲခံရသေးရဲ့ ….)
ကျနော့် အတွေးကတော့ ရှင်းပါရဲ့ဗျာ …
ကိုယ့်ချင်းကိုယ့်ချင်းမှ ပညာ မမျှဝေရင်
ကိုယ့်ချင်းကိုယ့်ချင်းမှ လျှိုရင် …
ကိုယ့်ချင်းကိုယ့်ချင်းမှ ထမင်းအိုး တုတ်နဲ့ထိုးတယ်ထင်ရင်…
အဲ … ကိုယ့်ထမင်းအိုး နိုင်ဂံဂျားသား လာ တုတ်နဲ့ထိုးတဲ့တချိန်
တောင်မင်း မြောက်မင်း မကယ်နိုင်မှာ အဓိက စိုးထိတ်မိသဗျ…
ဒီဂျစ်တယ်လ် ခေတ်မှာ SLR ဆိုတာဟာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတခုမဟုတ်တော့သလို
ပညာရှင် သက်သက်ရဲ့ ဥစ္စာ ဓနလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဗျ…
ဒါ့ပုံပညာကို ပညာရပ်တခုလို့ သက်မှတ်ရင် သည်ဘက်ခေတ် ဒါ့ပုံပညာသည်
တွေဆိုတာ ..ပညာသင်တွေ အိမ်သုံးတွေအတွက် အဘိဒန် မဟုတ်ရင်တောင်
ရပ်ကွက်အဆင့် မြို့နယ်အဆင့် စာကြည့်တိုက် သဘောလောက် ဆောင်ရမယ်
ထပ်ပြောရရင် ပညာဆိုတာ လျှိုတဲ့ ခေတ် သေဆုံးသွားတာ ကြာခဲ့ပါပြီ..
ပညာဆိုတာ ထပ်ဆင့်ပြန့်ပွားရင်း အသစ်ရှာဖွေရင်း
တိုင်ပင်နှီးနှောရင်း လေ့ကျင့် သင်ယူရမယ့်ခေတ်ပါ….
ပညာလျှိုတယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်က … မားကတ္တင်း မတတ်တဲ့…
အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့ … ငါလုပ်တတ်သမျှ သူများ လိုက်မလုပ်တတ်စေရ
ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် ဇောင်းပေးတဲ့ ခေတ် စနစ်လို့ ရှုံ့ချပါရစေဗျ…
ယနေ့ ခေတ်စနစ်ကတော့ ရှင်းရဲ့ …
ငါဘာလုပ်သလဲ ဘာသုံးသလဲ အကုန်ဖွင့်ချမယ်..
မကျေနပ်ရင် လိုက်လုပ် …အဲ့ ..ငါ့ ကော်ပီကတ်ပဲ ဖြစ်မှာဘဲ …
စု-တု-ပြုတယ်နော်…. အများ လက်ခံတာ မဟုတ်ရင် ဂွမ်းမှာဘဲ…
အဲ့ ..စု-တု-ပြုလို့မှ .. ကိုယ့်ထက် သာပြီး သကာလ
နင့် အထှာ ငါပါပြန်သင်မယ်အေ… အားလုံးအတွက်ပေါ့…
learning environment မဖြစ်သမျှတော့ ….
ထင်ရာမြင်ရာ ဆော်နေသမျှတော့ …
၁၀နှစ် အနှစ် ၂၀ ဘာမှ အဓိပ္ပါယ် ရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူးပဲ …
ဆော်ဗျာ ….အားလည်းပေးတယ် အားလည်းဖြည့်မယ်…
ပိုကောင်းနဲ့ မနက်ဖြန်အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ဒါ့ပုံတွေ
ကဲ မြောက်ပေးတဲ့လူကတော့ မြောက်ပေးနေပြီ
ကျုပ်လဲဘဲ ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက် ကွေးနေအောင်.
က ကြပါ ဆြာတို့ …
ကွေး အောင် ကကြပါ …
တက် အောင် ကကြပါ …(ကြွက် ပြောပါတယ်..)
နင့်ကြည့်ပြီး ငါတောင် ထ.က ချင်စိတ်ပေါက်လာဘီ
ညလေး လဲကျွှန်တော့်လို ပိုးဝင် အဲလေ ၀ါသနာပါသွားပြီထင်တယ်..
ကိုပေါက်ပြောတာအမှန်ဘဲဗျို့ မနေ့က ဈေးသည်ခေါင်းစဉ်အတွက် ရှောက်ရိုက်ရင်း စည်ပင်သာယာက လမ်းဘေးဈေးသည်ကိုဖမ်းနေတဲ့ပုံ သွားရိုက်တာ ဈေးခေါင်းကြီးခေါ်ပြောလို့ ပြန်ဖျက်လိုက်ရပါတယ်…ပုသိမ်ကမြို့ကျဉ်းတော့ ၁ယောက်နဲ့ ၁ယောက်သိနေတာကိုး…
ဆရာဂီ ရဲ့အားပေးမူကြောင့် အားတက်သွားပါပြီ DSLR အတွက်ကြိူးစားလိုက်ပါမယ်…
ကြောင်ကြောင်ရဲ့ပုံကိုတော့ လမ်းတွေ့ရင်မှတ်မိနေလို့ လှမ်းခေါ်မယ်နော်..
ရွာသူားတွေပြောသလိုဘဲပြောလိုက်မယ်….ဖြဲမရေ ကော်မန့်တွက် တိုးရှဲ့ပါတော်..
ပိုးဝင်တယ် ဆိုလို့ ဘာပိုးလဲ ၀င်ကြည့်တာ.. နည်းနည်းနောနော ပိုး မဟုတ်ဘူး။
ဒီတခါ လမ်းဘေး ဈေးသည် မရိုက်ပဲ အားရပါးရ မာန်ပါပါ ဓါး ပင့်ပြီး ရွယ်ပြီး ငါးခုတ် နေတဲ့ ဈေးသည် ကို ရိုက်လိုက်ပေါ့။ ဟိဟိ.. တော်ကြာ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ မပါရပဲ စီဂျေ ပြိုင်ပွဲ ၀င်နေရအုန်းမယ်။
တွေ့ပီ …. အဲဒီပိုး …. တစ်ကောင် .. နှစ်ကောင် …. သုံးလေးကောင်း
သြော် ဘာပိုးများ ၀င်လေသလဲဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တာ ဒီပိုးဝင်ရင်တော့ ကုရာနတ္တိ ဆေးမရှိပဲနော် သတိသာထားတော့ ရောက်လေရာမှာ ရိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ ဖြစ်နေတော့တာ မနောဆို မော်တော်ပီကယ်ကိစ္စလေး ရိုက်မိပါတယ်။ လိုင်းကားစီးတဲ့သူတိုင်းက မှတ်မိပြီး ခုထိပြောမဆုံးဖြစ်နေတော့ပဲ။
ကိုငပွကြီး …… ရေစက်ကလေးက ကြလုကြခင်လေးဆိုတော့ လက်နဲ့တောင်ခံထားချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်မိ တယ် …… ဒီလိုရိုက်နိုင်လို့လည်း ချီးကျူးပါတယ် ………
ကိုကိုပေ ကိုကိုဟိန်းဝင်း ရေ အားပေးတာတိုးရှဲ့နော်..ကိုကိုဗိုက် ရေ ကသာက ထသာထ ချသာချ..
မနော် ပြောသလိုဘဲ ကြာရင် ပိုးက ပိုဆိုးနေပြီ အခုတောင်ဆရာဂီပြောတဲ့ဟာမျိုးအကြမ်းဖျင်း စုံစမ်းကြည့်တာ ၁၄ လောက်ကျမယ်တဲ့ ဂစ်..ဂစ်..ဂစ်
ညလေး ပိုးဝင်တာ ၅နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ တော်တော်တော့ ခရီးရောက်နေလောက်ပြီ..အားကျတယ်..
ခိုင်ခိုင် ချီးကျုးလို့ ရောဂါပိုပြင်းသွားပြီ…အော်…၁၄ သိန်း ..၁၄သိန်း….
ဆူးရေ စီဂျေ တော့ ၀ါသနာပါသား ဒါပေမယ့် နယ်ကကျဉ်းတော့ သိပ်မလွယ်ဘူး သားသား ကြောက်ကြောက်
ကိုငပွကြီးရေ ပိုးဝင်တာတော့ ကေကေလည်း အတူတူပဲ ဘယ်နေရာသွားသွား ကင်မရာတကိုင်ကိုင်နဲ့မို့ အိမ်ကတောင် မျက်စိနောက်နေကြပြီလေ..:)
ပွပွကြီးရယ်စိတ်လျှော့ထားနော့့့့့် ဆရာတက္ကသိုလ် စိုးဝင်းရဲ့ဒုတိယအဆင့်မြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံပညာကျမ်းထဲက ရေးထားတာလေးသတိရသွားတယ့့့့်ဲဲအတတ်ပညာနှင့် ပစ္စည်းကရိယာများသည် ဓာတ်ပုံပညာရှင် ၏ အသုံးတော်ခံပစ္စည်းသာဖြစ်ပြီးကိုးကွယ်စရာပစ္စည်း မဖြစ်သင့်သည်ကို ဓာတ်ပုံပညာရှင်က အမြဲသတိရှိနေရန်အရေးကြီးပါသည် ။ တဲ့့့့ 